सडककै कब्जा गरेर प्रधानमन्त्रीको शक्ति प्रदर्शन
रूपा खड्का शुक्रबार​, माघ २३ २०७७
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को ओली समूहले आज राजधानीको दरबारमार्गमा शक्ति प्रर्दशन गर्दै छ । नारायणहिटी दरबारको दक्षिणतर्फको गेटै अगाडी सडकमा भव्य स्टेज बनाएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लगाएत उपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ ।
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको ओली समूहले आज राजधानीको दरबारमार्गमा शक्ति प्रर्दशन गर्दै छ । नारायणहिटी दरबारको दक्षिणतर्फको गेटै अगाडी सडकमा भव्य स्टेज बनाएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लगाएत उपप्रधानमन्त्री गृहमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ ।
कार्यक्रमको लागि अन्य समूहजस्तै ओली पनि सडक नै रोजेका छन् । हिजैदेखि पानीले पखालेर सडक चिटिक्क बनाइएको छ । सवारी साधनलाई रोक लगाएर सडकमै भव्य मन्च निर्माण भइरहेको छ । त्यस क्षेत्रमा त सवारी साधन रोकियो तर त्यसको प्रभाव भने यता कोटेश्वरसम्म देखिएको छ । ट्राफिक प्रहरीले भक्तपुर तथा काडाँघारी तिरबाट आएका गाडीहरु तीनकुनेबाटै फर्काएर रत्नर्पाक जान दिएको छैन ।
सर्वसाधारणहरु आफ्नो गन्तव्यमा पुग्न नसकि अलपत्र परेका छन् । काठमाडौंको विभिन्न १६ वटै ठाउँबाट जुलुस निस्किँने भएपनि बिहानै देखि सवारी आवतजावतमा ट्राफिक प्रहरीले नै अवरोध गराइराखेको छ ।
नारायणहिटी अगाडी ओलीले गरेको शक्तिप्रदर्शनको संकेत के ?
प्रधानमन्त्री तानाशाही बन्दै गएको भनी विपक्षी तथा आफ्नै पार्टीका नेता कार्यकताले लगाएको आरोप र आलोचनालाई थप बल पुग्ने संकेत आजको जनसभाले गर्ने छ ।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले दरबार छोड्नु अघिसम्म अत्यन्त कडा सुरक्षा व्यवस्था भएको सो दरबारमार्ग सडकखण्डमा अझै पनि कुनै प्रदर्शन र ठुला सभा हुने गरेका थिएनन् । तर आज सत्तामै रहेको नेकपा ओली समूहले भव्य शक्ति प्रदर्शन गर्दै छ ।
त्यसका लागि ओलीले हरेक सरकारी कार्यक्रममा जाँदा होस् वा उद्घाटन शिलान्यास अथवा आफ्ना संगठनको कार्यक्रम आमसभामा आउन चुलो निम्तो नै गर्दै हिडेका छन्। त्यतिमात्र होइन उनले आफ्नो विरोधीलाई शक्तिप्रैदर्शन कस्तो हुन्छ माघ २३ गते हेर्नु भन्दै खुलेआम चुनौती दिएका छन् ।
त्यतिमात्र होइन देशैभरबाट कार्यकर्ता ओसारिरहेका छन् भने ओली नेकपाले जनसभा सफल बनाउन तीन हजार स्वयंसेवक परिचालन गरेको छ । ढुकुटिको चावी नै आफैसँग भएपछि जनसभाका लागि राज्यशक्ति र ढुकुटीको राम्रै दुरुपयोग गरेको देख्न सकिन्छ ।
आमसभाको लागि नारायणहिटीको आँगन नै किन रोजे ? सोचनिय विषय छ । ३ लाख कार्यकर्ता भित्र्याउने दाबी गरेको ओली समूहले आफ्नो दाबी गरेको आधामात्र कार्यकर्ता आए भने पनि सुविधाले बस्ने ठाउँ भएको नारायणहिटि अगाडी छैन । खुलामन्च हुँदा हुँदै सडककै कब्जा गरेर गरेको यस्तो प्रदर्शनले जनमानसमा कस्तो छाप पर्ला ? शक्तिमा बसेर मैमत्ता बनेका ओली साच्चै तानाशाहतर्फ उन्मुख भएको स्पष्ट देख्न सकिन्छ ।
बिहीबार राजधानीका सडकमा मोटरसाइकल र ट्याक्सीमा दौरासुरुवाल र कालोटोपी लगाएका ओलीका तस्बिर रहेका फ्लेक्स प्रदर्शन गरिएको थियो । त्यस्तो फ्लेक्स अहिले दरबारमार्गका दायाँबायाँमा ठड्याइएको छ । हेर्दा हिन्दी सिनेमाको दृश्य जस्तो लाग्ने गरी दरबारमार्गका बाटोमा प्रधानमन्त्री ओलीको तस्वीर झुण्डाइएको छ ।
पुस ५ गते प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गरेदेखि नै नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले सडक आन्दोलन गर्दै आएको छ । तर त्यसको काउन्टनरमा सरकारमै भएको ओली समूहले पनि आफ्नो समर्थनमा आमसभाहरु गरिरहेको छ ।
२४ घण्टामा २८२८ संक्रमित थपिए,५२को निधन
प्रतिमान निमा स्मृति प्रतिष्ठानद्वारा लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई विभिन्न स्वास्थ्य सामाग्री हस्तान्तरण
भैसी चराउन जाँदा बाढीले बनेकाे टापुमा फसेकाकाे उद्धार
बाढीमा हराइरहेकाकाे खोजी र उद्धारमा जुट्न अध्यक्ष दाहालको आग्रह
उपचार गर्न दिल्ली जानुअघि नेता खनालको भने ‘‘पार्टी मिलाउनुस् कमरेड...’’
प्रार्थना उदय १० दिन अगाडी
सुजन पराजुली (शाङ्कर वेदान्ताचार्य) १ महिना अगाडी
एकराज पाठक १ महिना अगाडी